ကား အသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိ တ်နေပါ … ရာထူး တိုးတော့ မှာလား တိတ် တိတ်နေပါ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ ) – Shwe Naung
ကား အသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိ တ်နေပါ … ရာထူး တိုးတော့ မှာလား တိတ် တိတ်နေပါ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ )
Shwe Thuta | December 16, 2020 | Knowledge | No Comments
အိမ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိ တ်နေပါ။ ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိ တ်နေပါ။ အိမ်ထော င်ပြုတော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ေ တာ့ မှာလား၊ တိတ်တိတ်နေပါ။ ကျောင်းတက်တော့ မှာလား တိတ် တိတ်နေပါ။ ရာထူးတိုးတော့ မှာလား တိတ်တိ တ်နေပါ
ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အကောင်အ ထည် ပေါ်လုပေါ်ခင် အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်အကျိုး မလိုလားတဲ့ မိတ်ဆွေတုတွေကို သွားပြောမိတဲ့အတွက် မျှော်လင့် ထားတာတွေ ပျက်စီး တတ်ပါတယ်။
‘မိတ်ဆွေပါ’ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ထ က်သာ မနာလိုသူတွေရဲ့ ကွက်ေ ကျာ်ရိုက်မှု၊ ကုလားဖန်ထိုးမှုကြောင့် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို လက်တစ်ကမ်း အလိုလောက်မှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရတတ် ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် …. ဆိတ်ဆိတ်နြေ ခင်းသည်သာ အကောင်း ဆုံးပါ၊မိတ်ေ ဆွအပေါင်းအသင်း အများစု ဟာ သင်အခြေအနေ ကောင်းတာကို မြင်ချင်ကြပေမယ့် သူတို့ထက် သာသွားမှာ ကိုတော့ ကြောက်ရွံ့တတ်ြ ကပါတယ်၊ တစ်အူတုံဆင်း မိသားစုတွေမှာတောင် လူမသိ၊ သူမသိ မနာလိုမှုဆိုတာ ရှိတတ်စမြဲပါ။
အိမ္ ဝယ္ေတာ့ မွာလား တိတ္တိ တ္ေနပါ။ ကားအသစ္ ဝယ္ေတာ့ မွာလား တိတ္တိ တ္ေနပါ။ အိမ္ေထာ င္ျပဳေတာ့ မွာလား တိတ္တိတ္ေနပါ။ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ေ တာ့ မွာလား၊ တိတ္တိတ္ေနပါ။ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ မွာလား တိတ္ တိတ္ေနပါ။ ရာထူးတိုးေတာ့ မွာလား တိတ္တိ တ္ေနပါ
ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အေကာင္အ ထည္ ေပၚလုေပၚခင္ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကိုယ့္အက်ိဳး မလိုလားတဲ့ မိတ္ေဆြတုေတြကို သြားေျပာမိတဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတာေတြ ပ်က္စီး တတ္ပါတယ္။
‘မိတ္ေဆြပါ’ ဆိုတဲ့ ကိုယ့္ထ က္သာ မနာလိုသူေတြရဲ႕ ကြက္ေ က်ာ္ရိုက္မႈ၊ ကုလားဖန္ထိုးမႈေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ အိပ္မက္ေတြကို လက္တစ္ကမ္း အလိုေလာက္မွာ လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံးရတတ္ ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ …. ဆိတ္ဆိတ္ေနျ ခင္းသည္သာ အေကာင္း ဆုံးပါ၊မိတ္ေ ဆြအေပါင္းအသင္း အမ်ားစု ဟာ သင္အေျခအေန ေကာင္းတာကို ျမင္ခ်င္ၾကေပမယ့္ သူတို႔ထက္ သာသြားမွာ ကိုေတာ့ ေၾကာက္႐ြံ႕တတ္ၾ ကပါတယ္၊ တစ္အူတုံဆင္း မိသားစုေတြမွာေတာင္ လူမသိ၊ သူမသိ မနာလိုမႈဆိုတာ ရွိတတ္စၿမဲပါ။